Degmada iyo siyaasada - Örnsköldsviks kommun
- Degmada iyo siyaasada
Örnsköldsvik waxey kamid tahay 290 degmo oo Iswiidhan ku yaal. Siyaasiin la doortay baa go’aamiyo meheradaha degmada iyo adeega bulshada la siinaayo. Tusaale ahaan dugsiyada, daryeelka dadka gaboobay iyo dadka curyaamiinta, kaalmeenta bulshada, dab demiska, meherada xilliga firaaqada, wadooyinka, biyaha iyo qashimada.
Afartii sano halmar baa la qabtaa doorashooyinka guud. Bushada oo ku nool Örnsköldsvik waxey markaas dooranaayaan siyaasiinta oo fadhinaayo goobta degmada. Dhammaan qofkasto oo buuxiyay 18 sano iyo u diwaangalisantahay inuu degmada ku noolyahay wuxuu xaq u lee yahay inuu doorashada oo goobta degmada ka qeyb-qaato.
Goobta degmada[Kommunfullmäktige] waa meesha ugu sareyso oo go’aanada degmada looga gaaro. Ayaga baa go’aamiyo canshuuraha, hadefyada sare iyo miisaaniyada degmada iyo doortaan guddiga degmada iyo guddiyada kale.
Guddiga degmada baa hoggaaminaayo, isku dabo ridaayo iyo ka warhaynaayo meherada degmada. Ayaga baa siyaasad ahaan mas’uul ka ah horumarinta iyo dhaqaalaha degmada. Guddiga degmada baa soo talo jeedinaayo arrimaha goobta degmada ey go’aaminaayan iyo mas’uul ka ah go’aanada in la hirgaliyo.
Guddiyada kale oo degmada baa siyaasad ahaan mas’uul ka ah meheradaha quseeyo bulshada ku nool degmada. Guddikasto wuxuu lee yahay maamul oo waxaa ka shaqeeyo shaqaalaha degmada oo shaqadooda tahay iney hirgaliyaan guddiyada waxey go’aamiyeen.
Guddiga aqoonta[Bildningsnämnden] baa mas’uul ka ah dugsiga xannaanada, dugsiga xilliga firaaqada, dugsiga hidaha iyo dhaqanka, dugsiga farsamada, dugsiga aasaasiga, dugsiga sare, waxbarashada dadka weeyn iyo barashada luqada iswiidhishka oo dadka ajnabiga.
Guddiga arrimaha dhisida[Samhällsbyggnadsnämnden] baa mas’uul ka ah dhaqanka, xilliga firaaqada, wax dhisida, deegaanka, caafimaadka, gadiidka, wadooyinka, jardiinada iyo dab demiska.
Guddiga daryeelka iyo adabka aadamaha[Omsorgsnämnden och humanistiska nämnden] waxey mas’uul ka wada yahiin iney kaalmo siiyaan, daryeel iyo caafimaad siiyaan dadka u baahan. Waxey ahaan karan dadka gaboobay, caawinaada dadka curyaamiinta, kaalmeenta dadka cudurada nafsiga ku dhaco, la difaaco carruurta halista ku jiro, bixinta dhaqaalaha kaalmenta ku meelkaarida, caawinada qofkii doonaayo inuu iska joojiyo isticmaalida mukhaadaraadka ama wax kale.
Shirkadooyinka degmada iska leedahay
Degmada Örnsköldsvik waxey leedahay shirkad oo mas’uul ka ah biyaha, tubooyinka biyaha qaado, qashinka iyo dib u soo isticmaalida qashinka(Miva), guryaha (Övikshem), korontada(Övik energi), eroboorka diyaaradaha (Övik Airport) iyo dekada (Örnsköldsviks hamn och logistik).
Ka warheyn iyo ku yeelan saameynta